တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် မန္တလေး - ဆေးပညာ. တိုင်းရင်းဆေးတက္
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် မန္တလေး - ဆေးပညာ. တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် သည် မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်တွင်တည်ရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းသော တိုင်းရင်းဆေးတက ..
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်ကို ၂၀၀၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ယခုလက်ရှိ အဆောက်အဦးမှာ ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည်။မြေဧက ၁၁.၄၂ဧက ကျယ်ဝန်းကာ သန့်ရှင်း၍ စိမ်းလန်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တည်ရှိသည်။
၄။ ‌ဒေသနာနယ‌ဆေးပညာ များဖြစ်‌လေသည်။.
3. နက္ခတ် ‌ဆေးပညာ
နက္ခတ်ပညာကို အ‌ခြေပြု၍ ‌ပေါက်ပွားလာ‌သော ပညာမျိုး ဖြစ် သည်။ ‌ရှေး‌ဟောင်းနက္ခတ်ပညာအရ ဂြိုဟ်၊ နက္ခတ်တို့၏တည် ‌နေရာများ၊အကြီးအ‌သေးနှင့် အကွာအ‌ဝေး တိုင်းထွာချက်များမှစ ၍် သိပ္ပံနည်းကျပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်လှ‌ပေသည်။အဘယ့် ‌ကြောင့် ဆို‌သော်အ‌ခြေခံအကျဆုံး အချက်အလက်များမှန်ကန်တိ ကျမှသာလျှင် အခက်အလက်သဖွယ်ဖြစ်‌သော အ‌သေးစိတ် အ ချက်အလက် အယူအဆ များ မှန်ကန်တိကျဖွယ် ရှိနိုင်‌သော ‌ကြောင့် ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်း‌ဆေးသိပ္ပံ ‌ကျောင်းသားများအား သင်ကြား‌စေ သည့် အာယု‌ဗ္ဗေဒ‌ဆေးပညာဆိုသည်မှာ ‌ဒေါသ ၃ ပါး၊ ဓာတ် ရ ပါး၊ မလ ခေါ်အညစ်အ‌ကြေး ကြီးငယ်တို့ကိုလည်း‌ကောင်း၊ လျှာအရသာ ၆ ပါး၊ ဝိပါက‌ခေါ် ဝမ်းမီးမီးချက်ပြီး အရသာ ၃ ပါး၊ ‌ဆေး၏ ဂုဏ် ၂၀၊ ကိစ္စ ၁၉ စသည်တို့ကိုလည်း‌ကောင်း၊ အများဆုံး အ‌ခြေခံထား‌သော ‌ဆေးပညာဖြစ်သည်။
‌လေ၊ သည်း‌ခြေ၊ သလိပ်တို့ကို ‌ဒေါသ ၃ ပါးဟု ‌ခေါ် သည်။ ရသဓာတ်၊ အ‌သွေးဓာတ်၊အသားဓာတ်၊ အဆီဓာတ်၊အရိုး ဓာတ်၊ ခြင်ဆီဓာတ်၊ သုတ်ဓာတ်တို့ကို ဓာတ်စဉ် ရပါးဟုသတ် မှတ်သည်။ ကျင်ကြီး ကျင်ငယ်နှင့် ‌ချွေးတို့ကို မလကြီး ၃ ပါး အဖြစ်ဖြင့် လည်း‌ကောင်း၊ ‌ခြေသည်း၊ လက်သည်း၊ မျက်ရည် မျက်‌ချေး၊ နဖာ‌ချေး၊ စသည်တို့ကို မလငယ်များအဖြစ်ဖြင့်လည်း ‌ကောင်း သတ်မှတ်သည်။
ယင်း‌ဒေါသ၊ ဓာတ်၊ မလတို့‌ကြောင့် ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီး သည် ကာလရှည်စွာ ဖြစ်ပွားတည်‌နေနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆ သည်။ ယင်း‌ဒေါသ၊ ဓာတ်၊ မလတို့တွင်လည်း ‌ဒေါသ ၃ပါးတို့ သည် ပိုမို၍ ပဓာနကျ ‌လေသည်။ ပိုမို၍ အရင်းကျ‌လေသည်။ ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို စတင်တည်‌ဆောက်စဖြစ်‌သော ကာလ‌ေ၇ ကြည် ကာလကပင်လျှင် ‌လေပကတိ၊ သည်း‌ခြေ ပကတိ၊သလိပ် ပကတိ ဟူ‌သော ပကတိ ၃ မျိုးတို့၏ လွန်ကဲမှု၊ ယုတ်‌လျော့မှု အားဖြင့် ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ချယ်လှယ်စီမံခဲ့သည်ဟုယူဆ သည်။ အရွယ်‌ရောက်လာ‌သောအခါ ကိုယ်ပိုင်းအသားအ‌ရေကို လည်း‌ကောင်း၊ ဆံပင်ကို လည်း‌ကောင်း၊ သွားကိုလည်း‌ကောင်း၊ အသံကိုလည်း‌ကောင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း‌ကောင်း ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ကာလ‌ရေကြည်ကာလကမည်သည့် ပကတိဦး‌ဆောင်၍ ပဋိသ‌န္ဓေတည်‌နေခဲ့‌ကြောင်း သိနိုင်‌လေသည်။ ဥပမာ-လေပကတိ ဖြင့်ဦး‌ဆောင်၍ သ‌န္ဓေတည်ခဲ့လျှင် ကိုယ်ကာယ မ‌ပြေမပြစ်ရှိမည် ပိန်ကြုံမည်၊ အားနည်းမည်၊အသားအ‌ရေ ကြမ်းမည်၊ တွန့်မည်၊ ညို မည်၊ဆံပင် နည်းမည်၊ ကြမ်းမည်၊ ‌ခြောက်မည်၊ နက်မည်၊ သွားကျဲမည်၊ ကြမ်းမည်၊ ‌သေးမည်၊ အသံကျယ်မည်၊ ကွဲအက် မည်၊ စိတ်ဓာတ် လန့်တတ်၊ ‌မေ့တတ်၊ ငြင်းတတ်၊ ‌ဒေါသထွက် လွယ်တတ်၊ အသိဉာဏ်နည်းပါးတတ်ဖြစ်မည်။ဤကားအာယု‌ဗ္ဗေ ‌ဆေးပညာတွင် သ‌န္ဓေ‌ဗေဒ၏ လမ်းစတစ်စိတ်တစ်‌ဒေသနှင့် ‌ယေ ဘုယျသ‌ဘောမျိုးဖြစ်‌လေသည်။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုခဲ့‌သော ‌ဒေါသ၊ ဓာတ်၊ မလဟူ‌သော အုပ်စုကြီး ၃ မျိုးတို့‌ကြောင့် ကျန်းမာခြင်းလည်း ဖြစ်ရသည်။ မကျန်းမာခြင်းလည်းဖြစ်ရသည်။ ထင်ရှား‌အောင်ဆိုရလျှင် ‌ဒေါသ ဓာတ်၊ မလများလှုပ် ရှားသွားလာမြဲအတိုင်း လှုပ်ရှားသွားမှုမပြုပဲ တစ်‌နေရာတည်း၌စုကာ၊ ငုပ်ကာ၊ ‌အောင်းကာပွားမှု =စယဖြစ် ‌နေလျှင်‌သော်လည်း‌ကောင်း၊ ကုန်ခန်းခြင်း =ခီဏ၊ ပျက်စီးခြင်း =‌ကောပ ဖြစ်‌နေလျှင်‌သော်လည်း‌ကောင်း၊ မကျန်းမမာ‌ရောဂါ၇ ‌လေ ‌တော့သည်။
ယင်းတို့၏ ပွား၇‌ကြောင်း၊ ခန်း၇‌ကြောင်း၊ ပျက်၇ ‌ကြောင်း ဟူ‌သော နိဒါန်းအသီးသီးတို့ကိုလည်း ‌ကောင်း၊ ပွား၊ ခန်း၊ ပျက်လက္ခဏာ အသီးသီးတို့ကိုလည်း‌ကောင်း ကြည့်ကာ ပွားလျှင် ယုတ်‌လျော့‌အောင်၊ ခန်းလျှင်ပြည့်‌အောင်၊ ‌ဖောက်ပြန် ပျက်စီးလျှင် ပုံမှန်ဖြစ်‌အောင် ပြု‌ပေးခြင်းသည် အာယု‌ဗ္ဗေဒ ‌ဆေး ပညာ၏ အ‌ခြေခံ အကျဆုံးကုသ‌ရေး စနစ်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ကုသရာတွင် ၁ ပူရပ်‌အေးရပ် စ‌သော‌ဒေသ၊ ၂ ပူချိန် ‌အေးချိန် စ‌သောကာလ၊ ၃ ငယ်-လတ်-ကြီး ဟူ ‌သောအရွယ်၊ ၄ ခန္ဓာကိုယ်အ‌နေအထား ၅ ခွန်အားအ‌ခြေ အ‌နေ၊ ၆ ခံနိုင်ရည်၊ ရ နုံ့ထက်စ‌သော ဝမ်းမီးအ‌ခြေအ‌နေ၊ ၈ သင့်‌လျော်‌သော‌ဆေးဝါး၊ ၉ သင့်‌လျော်‌သောအစာ၊ ၁၀ ပကတိရုပ်ဓာတ်အခံ၊ ၁၁ ‌ရောဂါ၏ အ‌နေအထားတို့ကိုပါ ချင့်ချိန်တိုင်းဆကာ ကုသ၇‌ပေသည်။
အာယု‌ဗ္ဗေဒ ‌ဆေးပညာတွင် ပြဆိုခဲ့‌သော ရသ၊ ဝိပါက၊ ဂုဏ်၊ ကိစ္စ စသည်တို့သည် သက်ရှိသက်မဲ့ အားလုံး အတွက် ‌ရှေး‌ဟောင်း ဓာတ်ခွဲနည်းများဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ‌ဆေးပစ္စည်းဆိုသည်မှာလည်း ပထဝီ၊ အာ‌ပေါ၊‌တေ‌ဇော၊ ဝါ‌ယော၊ အာကာသဟူ‌သော ဘုတ်ကြီးငါး ပါး =ပဉ္စဘုတ် ၌ အမှီပြု‌ကြောင်းကိုလည်း‌ကောင်း၊ ‌ဆေးပစ္စည်း၏ ဂုဏ် ၂ဝအနက် မည်သည့် ဂုဏ်များ လွန်ကဲလျှင် ဓာတ်ကြီးငါးပါးအနက် မည် သည့်ဓာတ် လွန်ကဲ‌သော‌ဆေးမျိုး ဖြစ်သည်ကို လည်း‌ကောင်း၊ မည်သည့်ဓာတ်များ လွန်ကဲလျှင် မည်သည့်‌ဒေါသမျိုးကို ငြိမ်ဝပ် ‌စေသည်။ ဆုတ်နစ်‌စေသည်၊ ပွား‌စေသည်ဟူ‌သော အချက်များကို လည်း‌ကောင်း၊ အရသာ ၆ ပါး အနက် မည်သည့်ဓာတ်လွန်ကဲ ‌သော‌ကြောင့် မည်သည့်အရသာ ဖြစ်ရသည်ကို လည်း‌ကောင်း အကျယ်တဝင့် ‌ဖော်ပြထားချက်များပါသည်။ ဤအချက်များကို ‌ထောက်ပါက အရင်းခံအကျဆုံးမှာ ပဉ္စဘုတ်‌ခေါ် ဓာတ်ကြီးငါး ပါးသာလျှင် ဖြစ်‌ကြောင်း သိသာ‌ပေသည်။
စင်စစ်ကားပြဆိုခဲ့သည့် ‌ဒေါသ ၃ ပါးဆိုသည်မှာ လည်း ဓာတ်ကြီးငါးပါးပင်အ‌ခြေခံဖြစ်‌လေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ‌လေဓာတ်တွင် ဝါ‌ယောဓာတ်နှင့် အာကာသဓာတ် အ‌ခြေခံ ‌ကြောင်းကို လည်း‌ကောင်း၊ သည်း‌ခြေ ဓာတ်တွင် ‌တေ‌ဇောဓာတ် အ‌ခြေခံ‌ကြောင်းကိုလည်း‌ကောင်း၊ သလိပ်ဓာတ်တွင် ပထဝီဓာတ် နှင့် အာ‌ပေါဓာတ် အ‌ခြေခံ‌ကြောင်းကိုလည်း‌ကောင်း အာယု‌ဗ္ဗေဒ ကျမ်းများတွင် ပြဆိုကြသည်။ ‌ဒေသနာနယ‌ဆေးပညာ ‌ဒေသနာနယ ‌ဆေးပာဆိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘုရား‌ဟော ကြား‌တော်မူသည့် သ‌ဘောတရားဆိုင်ရာ‌ဒေသနာ‌တော်ကို အရင်း ခံ၍ ‌ဆေးပညာအတွက် တီထွင်ကြံစည်ထား‌သော စနစ်ဖြစ် သည်။
အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘုရား‌ဟောကြား‌တော်မူသည့် ပထဝီ၊ အာ‌ပေါ၊ ‌တေ‌ဇော၊ ဝါ‌ယောဟူ‌သော မဟာဘုတ်‌လေးပါးသ‌ဘော များကိုလည်း‌ကောင်း၊ အဋ္ဌကထာဋီကာ ဆရာတို့၏ ဖွင့်ပြချက် များကို လည်း‌ကောင်း ယင်းမဟာဘုတ်‌လေးပါးတို့ကိုစွဲမှီ၍ ဖြစ် ‌သော ဥပါဒါရုပ် သ‌ဘောများကို လည်း‌ကောင်း အထူးသဖြင့် အာကာသ သ‌ဘောကိုလည်း‌ကောင်း အများဆုံးအ‌ခြေခံ ဥပါဒါ ရုပ်တို့တွင်ထား၍ တီထွင်ကြံစည်ထားသည့် စနစ်ဖြစ်‌ပေသည်။ ယင်းမဟာဘုတ်‌လေးပါးနှင့် အာကာသဟူ‌သောဘုတ် ငါးပါး ပဉ္စဘုတ် ကို အ‌ခြေခံ‌သော‌ဆေးပညာ သ‌ဘောများ သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ‌စော‌စောကပင် ‌ပေါ်‌ပေါက်ခဲ့သကဲ့သို့မြန်မာ နိုင်ငံသို့လည်း ‌စော‌စောကပင်‌ရောက်ရှိခဲ့သည့် အ‌ထောက်အထား များ‌တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ‌စော‌စောပိုင်းကပင် ပဉ္စဘုတ် ‌ဆေးပညာ နှင့် ပဉ္စဘုတ်‌ဆေးကျမ်းများ ထွန်းကားခဲ့‌သော်လည်း ယင်းတို့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းလာ ‌ဒေသနာနည်းများ‌ပြောပ ‌လောက်‌အောင် စနစ်တကျ ပါဝင်ခြင်းမရှိ‌ပေ။
ထို‌ဆေးပညာ၌ ဘုတ်ငါးပါးတို့တွင် ‌တေ‌ဇောဓာတ် ဥဏှ‌တေ‌ဇော၊ သီတ‌တေ‌ဇော တို့ကိုအ‌ကြောင်း ဓာတ်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ကျန်‌လေးပါးတို့ကို အကျိုးဓာတ်အဖြစ်သတ် မှတ်သည်။ကျန်ဓာတ်‌လေးပါး တို့ကိုလည်း နှစ်မျိုးစီ ခွဲခြားကာ နူးညံ့ပထဝီ၊ ယိုစီးအာ‌ပေါ၊ လှုပ်ရှားဝါ‌ယော၊ ပိုင်းခြားအာကာသ တို့၏ အ‌ကြောင်းခံကို ဥဏှ‌တေ‌ဇောဟုသတ်မှတ်သည်။ ခက်မာ ပထဝီ၊ ဖွဲ့စည်းအာ‌ပေါ၊ ‌ထောက်ကန်ဝါ‌ယော၊ အ‌ပေါက်အာကာ သတို့၏ အ‌ကြောင်းခံကို သီတ‌တေ‌ဇောဟု သတ်မှတ်သည်။ ထို့ပြင် ပထဝီဓာတ်နှင့် အာ‌ပေါဓာတ်၊ ဝါ‌ယောဓာတ်နှင့် အာကာသဓာတ်၊ ‌တေ‌ဇောဓာတ်နှင့်ဝါ‌ယောဓာတ်တို့ကို မိတ်ဓာတ် အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ပထဝီဓာတ်နှင့် ဝါ‌ယောဓာတ်၊ အာ‌ပေါ ဓာတ်နှင့် အာကာသဓာတ်တို့ကို ရန်ဓာတ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ပထဝီဓာတ်နှင့် အာ‌ပေါဓာတ်တို့ကို အ‌လေးဓာတ်၊ အသက်ဓာတ် အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ‌တေ‌ဇောဓာတ်နှင့် ဝါ‌ယောဓာတ်တို့ကို အ‌ပေါ့ဓာတ်၊ အတက်ဓာတ်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ အချုပ်အားဖြင့် အပူအ‌ကြောင်းခံ‌သော အနာ‌ရောဂါ ၃ မျိုး၊ အ‌အေး အ‌ကြောင်းခံ‌သော အနာ‌ရောဂါ၊ ၃မျိုး၊ ပေါင်း ၆မျိုး အဖြစ် မူတည်ကာ ‌ရောဂါ‌ပေါင်း သက်ရှိသက်မဲ့ ‌ဆေး ပစ္စည်း‌ပေါင်း‌ဆေးအမျိုး‌ပေါင်း ‌ခြောက်ဆယ်၊ ‌ခြောက်ရာ၊‌ခြောက် ‌ထောင်၊ ရှိ‌စေဦး‌တော့ ဤ ၆ မျိုး၌ အကျုံးဝင်ရမည် ဟူ‌သော ခံယူချက်ဖြင့် တီထွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်‌လေသည်။ ကာလအတန်ကြာ ‌သောအခါ အပူနာ၌တစ်မျိုး၊အ‌အေးနာ၌ တစ်မျိုးတိုးကာ ၈ မျိုး ဖြစ်လာသည်။ သဘာဝဓမ္မ ဆရာ‌တော်ဟု ထင်ရှား‌သော ဆရာ ‌တော် ဦးဣန္ဒြိယသည် ယင်း‌တောင်သာ‌ဆေး ပညာကိုအများဆုံး ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင် တိုးချဲ့ကြံစည်နိုင်‌သော ဆရာ‌တော်အဖြစ် ထင် ရှား‌လေသည်။ သ‌ကေင်္တ ပြုပုံကအစ အပူနာ‌လေးမျိုးကိုက-၁ က-၂ က-၃ က-၄ ဟူ၍ လည်း‌ကောင်း၊အ‌အေးနာ‌လေး မျိုး ကို ခ-၁ ခ-၂ ခ-၃ ခ-၄ ဟူ၍ လည်း‌ကောင်း လွယ်ကူ‌ခေတ်မှီ‌အောင် ပြုပြင်တီထွင် ခဲ့‌လေသည်။ ဤ‌ဒေသနာနယ ‌ဆေးပညာစနစ်အရ ‌ရောဂါအသီးသီး တို့၏ ဖြစ်‌ကြောင်း နိဒါန်း များ၊ လက္ခဏာများ၊ ကုဖွယ်‌ဆေး များကိုပါ သိမြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း ရှိ‌ပေသည်။ ဆိုခဲ့‌သော အာယု‌ဗ္ဗေဒ ‌ဆေးပညာနှင့် ‌ဒေသနာနယ ဆေးပညာတို့သည် မြန်မာ့ရိုးရာ တိုင်းရင်း‌ဆေး ပညာအဖြစ် နှစ်‌ပေါင်းများစွာကပင် အခိုင်အလုံ အကျိုးပြုခဲ့သည်နှင့်အညီ တိုင်းရင်း‌ဆေး သိပ္ပံ‌ကျောင်းတွင် ‌ကြောရိုးအ‌ခြေခံ အဖြစ်သင် ကြားရ‌လေသည်။
Microbiology and Physiology.
ရောဂါနိဒါန်းနှင့် ကုထုံး ဒုတိယပိုင်း.
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ သ‌ဘောတရား.
5.1. သင်ကြားသည့်ဘာသာရပ်များ တိုင်းရင်း‌ဆေး ပြည်သူ့‌ဆေးရုံ
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်(မန္တလေး), ဆေးပညာ. တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်(မန္တလေး),